Eric Bailly oo seegi doona kulanka Super Cup ay Man United la yeelan doonto Real Madrid – Gool FM
Eric Bailly oo seegi doona kulanka Super Cup ay Man United la yeelan doonto Real Madrid
(UEFA) 24 Luulyo 2017. Manchester United ayaa waxaa kulanka Real Madrid ee UEFA Super Cup ka maqnaan doona daafacooda birta ah ee Eric Bailly kaddib markii qoorta loo suray 3-kulan oo ganaax ah.
Daafaca reer Ivory Costa ayaa sheegi doona kulanka ugu horreeya ay Man United ciyaari doonto Champions League kal ciyaareedka cusub kaddib markii uu xiriirka UEFA xaqiijiyay in laacibka la dul dhigay saddex kulan oo ganaax ah markii kaarka cas looga saaray lugtii labaad ee semi-final kii Europe League ay Man United guusha ka gaartay Celta Vigo kal ciyaareedkii tagay.
Bailly ayaa laga saaray Old Trafford kaddib markii uu gacanta wajiga ka saaray John Guidetti, isla markaana uu dagaal kiciyay taa oo keentay in sidoo kale kaarka cas la siiyo daafaca Celta Vigo ee Facundo Roncaglia.
Bailly ayaa kulankii koowaad ee ganaaxiisa soo qaatay kaddib markii uu seegay finalkii Europe League ay kooxdiisu ka guuleysatay Ajax wuxuu kaloo sheegi doonaa kulanka ay Madrid kula ciyaari doonaan Skopje iyo kulanka ugu horreeya ee Champions League.
Man United ayaa xalay rigoorayaal uga adkaatay Real Madrid kulan saaxiibtinimo ay ku yeesheen Mareykanka kolkaa uu daafaca cusub ee Red Devils Victor Lindelof uu kooxda rigoore ku keenay.
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Inter Milan vs Olimpique Lyon 1-0